१३ बर्षिया बालिकालाई ४ जनाले गरे पा’लैपा’लो….(भिडियो सहित बाहि’रियाे) – Khula kura
१३ बर्षिया बालिकालाई ४ जनाले गरे पा’लैपा’लो….(भिडियो सहित बाहि’रियाे)
हाम्राे स’माजमा पछिल्लाे समय बिभि न्न किसिमका घट नाहरु बाहि रिने गरेका छन् । त्यस्तै, पथरीको १३ वर्षीय बालिकालाई चार जना मि लेर पटक-पटक ज बर्ज स्ती क र णी ग रे को बाहि रिएको छ । भूटानी श’रणा’र्थी शि’विर’मा नसो’चेको भएको छ ।
बालिकालाई पैसा अनि चाउचाउ दिदै फकाउँदै पट कपटक ब’ल’ त्का’र गरेको कुरा बा’हि रिएको हो । स्थानीय एक युवाले बालिकालाई क र णी ग र्दै गरेको प्र’तक्ष्य भेटेपछि उनलाई समा तेपछि अरु तीनजना समा तिएको बताइएको छ । उनले बालिकासँग धेरैबेर कुरा का नी गरेर सोधेपछि बा लिकाले यस्तोसम्म सु नाइन कि सुनेर सबैका आँखा रसाए ।
केटि भएको थियो त बालिकालाई कसरी चा रजनाले पटकपटक यस्तो गरे त सुरूदेखिको सम्पूर्ण ना लीबे ली तलको भिडियोमा हेर्नुहोला बालिकाले यस्तोसम्म सु’नाइन । १३ वर्षीय बालिकालाई ६० वर्षीय वृद्ध अनि शिक्षक ले समेत छो डे नन् भन्दै स्थानीयहरुले यस्तोसम्म सु नाएकी सुन्ने सबै छक्क परे ।
पथरीको भुटा नी शर णा र्थी शि विरमा रहेकी बालिकाको अव स्था एकदमै ना’जुक रहेको त्यहाँ बा लक्ल व सञ्चा लन गर्ने महिलाले बताए’की छिन । बाँकि हेर्नुहाेस् भिडियाेमाः
मिलेको अनुहार, सल क्क परेको श’रिर गो’रो व’र्णकी युवतीमाथि धेरैको न’जरमा प्राय युवककाे ध्या न जान्छ र उनीहरु ती युवतीहरुसँग बिहे गर्न चाहान्छन्।
राम्रो सस्का र भएको महिलाले घरलाई स्व र्ग बनाइदिन्छन्, उनले पति र उसको परिवारको ख्या ल राख्छिन् तर नराम्रो सस्कार भएको महिलाले घरलाई नर्क जाने गर्छन् भन्ने धार्मिक शा स्त्रमा उलेखन गरिएकाे छ ।
मान्छेकाे सुन्दरताले उनीहरुकाे ब यान गरेर केहि गुण भने पाइदैन्, बाहिर हेर्दा सुन्दर देखिएकी युवतीमा सर्वगुण सम्पन्न हुनु आवश्यक ठान्दैनन । तर युवती सुन्दर हुनु पुरुषको लागि दुर्भाग्य हुने सत्यता छ ।
आचार्य चाण क्यको सुन्दरताको बारेमा केहि फरक नजर रहेको छ । उनको अनुसार सुन्दर ता मात्र देखेर कहिल्यै विवाह जस्तो महत्वपुर्ण निर्णय गर्न हुँदैन । उनले यदि कोही पुरुषले कसैको सुन्दरतालाई देखेर विवाह गर्छ भने उ भन्दा मु र्ख कोही हुँदैन भनेका छन् ।
युवतीको सुन्दरता मात्र देखेर विवाह गर्नु मुर्ख ता हो । पुरुषहरु केटी राम्रो देखेपछि उनीहरुको स्वभाव, आनीबानी र गुण अवगु णको बारेमा त झन् सोच्दैनन त्यसैले पछि पछु ताउनु पर्छ ।
सविताको सासु रुँदै मिडियामा अर्को रहस्य बाहिरियो खुलाईन झन ठूलो रहस्य (हेर्नुहोस भिडियो)
अक्सिजन नपाएर छ’ट्पटा’एकी आमालाई आफ्नै मुखबाट छोरीले दिइन् अक्सिजन (भिडियोसहित)